Somali | Fonds auf Augenhöhe
Heerka Indhaha: La kulmida, Fahamka, Wada Noolaashaha
Sanadkii 2016, Software AG – Foundation ka socota Darmstadt ayaa bilawday “Auf Augenhöhe” ("Heerka Indhaha") Maalgeshi la samee wada-hawlgalayaasha waxayna siinayeen in kabadan nus milyan oo ah lacagta euro. Ka dib xiligii ugu sarreysay ee loogu yeeray dhibaatada qaxootiga, ujeeddada wadajirka ah waxay ahayd in la xoojiyo hawlgelinta rayidka ee qaxootiga iyo muhaajiriinta timid, iyo sidoo kale xaruumo dawlad oo si dhakhso ah u fududeenaya (magan galyo), oo lagu abuuro isku xirnaan bulsho oo la kulankana ka dhici kara heerka indhaha.
Qaab maamul la’aan iyo isku-dhafnaan la’aan
Arintan, maal-gelinta kaliya ma ahan kaliya mashaariicda kabida, taasoo dadka ka kala socda dhaqamada kaladuwan ay isula dhaqmi karaan si ixtiraam leh, laakiin wuxuu sidoo kale ha u ogolaado codsadayaasha in loo qeexo nafsadooda, waxa ay ugu baahan yihiin kulamadan - iyada oo aan waqti adag loo qaban, shuruudaha kabista adag iyo habraacyo ah dalabka adag.
Illaa 5,000 oo ah lacagta EUR oo loogu talagalay mashaariicda maxalliga ah iyo dadaallada
Si loo codsado kabida mashruuca leh xaddiga lacageed oo ah ilaa 5000 oo lacagta EUR ah, bilowgii, kaliya aasaaska muwaadiniinta leh shaabad tayo leh iyo hadhow, sidoo kale aasaaska muwaadiniinta u qalma sumadaha tayada leh, ayaa awooday inay soo gudbiyaan codsiyada mashaariicooda u gaarka ah ama ay wakiil ka noqdaan dadaalada maxalliga ah.
Naqshadaynta goobo banaan
Qaabkeeda furan, oo lagu muujiyey jaangooyo madhan, maal-gelinta ayaa u baneeysay meelo loogu talagalay qaabab kala duwan iyo fikrado. Mararka qaarkood, wadatashi, taageero iyo wadahadal ayaa loo baahnaa, mararka qaar waxaa ku lug lahayd isu imaatin ku saabsan farshaxan iyo (cunitaan) dhaqan, kulanka caadiga ah ama isboortiga. Bartamihii-2020, ku dhawaad 180 mashruuc oo aad u kala duwan ayaa loo soo saaray qaabkan, ooy kujirto xarun raadiyo is-dhexgal ah, adeegyada loogu talagalay is-abaabulida qaxootiga iyo soosaarista masraxiyada ee maadooyinka "wadanka hooyo" iyo "baxsiga".
Lacag maal-gelin cusub iyo shuraako
Iyaga oo laga cabsi qabo kobcinta nacaybka isla mar ahaantaana lagu dhiirrigeliyay hufnaanta sare ee maal-gelinta, Software AG – Foundation ayaa go'aansaday inuu sii wado ku lug lahaanshaha qaab isku day iyo tijaabin ah arimaha “socdaal” iyo “is-dhexgal”. Sidaa darteed, waxay ku bixisay 300,000 oo ah lacag EUR oo ah akoontiga maal-gelinta ahayd 6 Febraayo 2020 iyo marka lagu daro aasaaska muwaadiniinta, waxay heshay House of Resources (HoR) sida iskaashi dheeri ah, kaas oo bulshadii ku lug lahayd ay sidoo kale ka heli karaan taageero mustaqbalka, cadad dhan 3000 EURO ilaa 5,000 oo ah lacagta EUR ah. iyadoo ku xiran shuruudaha. Dhanka kale, sanduuqa, kaas oo Software AG - Stiftung 2021 ay mar kale ku maalgelisay nus milyan euro (oo loo qaybiyey saddex sano), ayaa si wada jir ah ula shaqeyneysa laba iyo toban ka mid ah wadarta ah 20 HoR.